Amahhotela sezomlando EYurophu Futhi How To Get Kukhona | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Amahhotela sezomlando EYurophu Futhi How To Get Kukhona
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 29/12/2019)
Amahhotela sezomlando eYurophu hhayi umbono ongavamile, ikakhulu emadolobheni amakhulu nge umlando onothileko. Paris, London, Rome, Munich, Vienna - zonke lezi amadolobha nezindawo lovely ukunikela. izivakashi ngubani ifuna okunethezeka bendabuko ngeke kube nobunzima ekutholeni indawo ukuze uhlale e-Europe. Ingxenye best ngakho wukuthi ungakwazi ukuhamba kuyo yonke le mizi ngesitimela, ibhajethi. Nazi phezulu amahhotela ezinhlanu mlando eYurophu nase kanjani lapho ngesitimela:
1. Siqala uhlu lwethu Amahhotela sezomlando nge – I-Ritz, Paris
Alukho uhlu top amahhotela mlando e-Europe kungaba ephelele ngaphandle Paris. Iparele elilodwa izihambi yayo umkhakha ivelele: I-Ritz. ihhotela inama umlando ocebile kanye ingaphakathi zikanokusho ukuya nalo. It yasungulwa ngo 1898, ngisho ke kwaba esivelele induduzo.
I-Ritz kwaba ngokwemvelo ukukhetha ethandwa amalungu European umphakathi eliphezulu. Ezinye izivakashi zayo ezidumile babe iNkosana kanye Duchess of Windsor, Coco Chanel, futhi u-Ernest Hemingway, phakathi kwabanye. Uma ufisa ukuhlola yayo elithakazelisayo umlando, ungathatha isitimela eParis kusuka kwamanye amadolobha eziyinhloko zaseYurophu efana London, Rome, Amsterdam, noma Brussels.
2. Belmond Cadogan Ihhotela, London
Belmond Cadogan zehhotela e-London kubhekwa ehhotela Boutique, kodwa has a eside futhi kujabulise umlando. Abanye bangathi kwaba ngisho okukhulu ngezinye izikhathi, njengoba Oscar Wilde wayelindele kokuboshwa kwakhe lapho 1895. I Cadogan has 64 amakamelo kanye Edwardian emangalisayo Isibhakabhaka. Kuyinto Townhouse mlando, futhi uye waqhubeka eziningi uhlamvu esiyingqayizivele kwenkathi. Uma uthatha isincomo yethu yokuqala, ungase kalula ukuhamba kusukela Paris London ngesitimela.
3. Albergo del Sole al onkulunkulu, Rome
Uma kuziwa amahhotela mlando e-Europe, Albergo del Sole al onkulunkulu eRoma ithatha ikhekhe. Kuyinto kwelinye lamahhotela endala kunawo wonke emhlabeni, eyasungulwa ngo 1467! Amagumbi ezibheke onkulunkulu kukhona okungcono, ukuqedela imibhede Renaissance-isitayela frescos wangekhulu le-17 njengoba umhlobiso. Akukona usathola kangcono noma ngaphezulu zomlando kunalokho. Enye ibhonasi wukuthi uhamba eRoma Kulula kakhulu ngesitimela, ikakhulukazi kusukela nezinye ezinkulu emadolobheni Italian.
4. Ihhotela Torbrau, Munich
I Torbrau waqala njengendawo abagibeli abakhathele kusukela Salzburg ukuba abe ukuphumula kanye ubhiya okuhle. Kuye ukusebenza phezu 500 iminyaka, futhi wathola yokulungiswa walo wanamuhla ku '90s. I Torbrau kuyinto intandokazi ngezamabhizinisi kanye nezivakashi abafuna more ebukekayo mlando ehhotela isipiliyoni. Uma ungumuntu ngokuvakashela Munich ngesitimela kusukela Berlin, Vienna noma kweminye imizi yaseYurophu, ungase uhlele ukuba ngihlale Torbrau.
Cologne eMunich Izitimela
Grand Hotel Wien eyakhelwe ngaphakathi 1870, futhi kuphela wachitha imali esifushane njengendawo yokuhlala yangasese. Kuyinto omdala "Ring Amahhotela" endaweni Opera we Ringstrasse e Vienna. Ngokwazi umlando uya, ihhotela oboné bukhona kokubili injabulo nokukhungatheka nokwaphuka kwenhliziyo. Kwakuwusuku okwasemuva we Mayerling indaba okwaphela kabuhlungu, nokushona Austrian Umqhele Prince, uRudolf no-sithandwa sakhe, Baroness Marie Vetsera. Uma indaba onawe umxhwele, ungase unezele Grand ohlwini lakho amahhotela mlando eYurophu ukuvakashela. Head Vienna ngesitimela kusukela Munich, nge stop at Salzburg.
Ukuvakashela Amahhotela sezomlando eYurophu zemininingwane Ukufingqa!
Ingabe ufuna ukuvakashela ezinye yezinto ezithakazelisa kakhulu amahhotela mlando e-Europe? Hlela uhambo lwakho ngokusebenzisa emadolobheni amakhulu European futhi ukubhuka athenge amathikithi esitimela ngemali ukuze lapho!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/historic-hotels-europe/ - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ihhotela #amahhotela #Vienna europetravel Munich trainjourney amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelaustria travelfrance travelgermany travelparis travelrome